Safal Khabar - सोमेश्वर गढीको पथ्थरलाई मुर्तिको स्वरुप दिइने, माडी पुगे ३० बढी कलाकार
सोमेश्वर गढीको पथ्थरलाई मुर्तिको स्वरुप दिइने, माडी पुगे ३० बढी कलाकार
शुक्रबार, २२ कार्तिक २०७६, १८ : २२
चितवन । चितवनको दक्षीणी क्षेत्रको माडी नगरपालिकामा रहेको धार्मिक तथा ऐतिहासीकस्थल सोमेश्वर गढीका पथ्थरहरुलाई मुर्तिको स्वरुप दिइनेभएको छ । नगरपालिकाले यहि कार्तिक २३ गतेदेखि माडी राष्ट्रिय प्रस्तर मूर्ति कार्यशाला २०७६ आयोजना गर्दैछ ।
१८ दिनसम्म चल्ने सो कार्यसालामा राष्ट्रिय तथा अन्तिराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त कलाकारहरुले सोमेश्वर गढी क्षेत्रमा प्रस्तर मूर्ति निर्माण गर्नेछन । सो क्रममा धार्मिक, सांस्कृतिक, समसामयीक र परम्परागत गरी कम्तिमा ३० वटा मूर्ति निर्माण हुने नगरपालिकाका उपप्रमुख तारा कुमारी काजी महत्तोले बताइन ।
मुर्ति निर्माणका लागि ३० जना भन्दा बढी कलाकारहरु आज माडी पुगीसकेका छन । उनिहरुले १८ दिनसम्म गढी क्षेत्रमै बसेर त्यहाँका विभिन्न ठुला साना ढुंगा तथा पहाडलाई खोपेर मूर्तिको स्वरुप दिनेछन ।
कला क्षेत्रको सम्मान गर्दै आयोजित राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रमले गढीलाई कलामार्फत खुल्ला मूर्ति संग्रहालयको रुपमा परिचित गराउनका साथै भविष्यमा खोज र अनुसन्धानको केन्द्र बन्ने उपप्रमुख महत्तोको भनाई छ ।
पर्यटकिय क्षेत्र सोमेश्वर गढीलाइ सरकारले १०० पर्यटकीय गन्तव्यको सूचिमा सुचिकतृ गरेको छ । भ्रमण वर्ष २०२० लक्षित कार्यशालाले पर्यटकलाई माडी भ्रमणको गन्तव्य बनाउन र पर्यटन प्रवद्र्धनमा कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास लिएको छ । भारतको सिमा नजिकै नेपाली भुभागमा रहेको यस क्षेत्रमा विभिन्न अवसरमा लाखौँ भारतीय तिर्थालुहरु आउने गर्दछन ।
प्रस्तर मूर्ति कार्यशाला सम्पन्न गराउन १९ सदस्यीय समिति पनि गठन गरिएको छ । कार्यशाला सम्पन्न गराउन करिव २५ लाख खर्च लाग्ने संचारकर्मि एवंम समितिका सदस्य गोविन्द न्यौपानेले बताए ।
सोमेश्वर गढी क्षेत्रको विकासका लागि नगरपालिकाले गढी जाने नयाँ ३ किलोमिटर सडक पनि निर्माण भईसकेको छ । यस्तै गोल पार्क निर्माण, शालीग्राम पार्क, सुचना केन्द्र निर्माण, आवास, शुद्ध पिउने पानी, शौचालय निर्माण लगायतका कामहरु गरीहरेको छ । गढी क्षेत्रका पथ्थरहरुलाई मूर्तिको स्वरुप दिनका लागि यसअघि माडी नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभाले राष्ट्रिय मूर्ति कार्यशाला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आहा माडीको सोमेश्वर गढी : पत्थरहरु मुर्तिमा परिणत (फोटोफिचर)
माडी नगरपालिकामा रहेको धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल सोमेश्वर गढीका पत्थरहरु अहिले विभिन्न किसीमका मुर्तिमा परिणत...
१. स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण : छानबिनमा तानिए उपप्रधानमन्त्री पोखरेल
२. जुनमा अमेरिकी बजेट घाटा आठ खर्ब ६४ अर्ब डलर
३. सभामुखलाई बुझाइयो सोती घटनाको प्रतिवेदन
४. तनहुँ पहिरो अपडेट : मृतकको सङ्ख्या ११
५. बङ्गलादेशमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई लाखको हाराहारीमा, निको हुनेको सङ्ख्या ५४. ३१
६. कोरिया जान पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन
७. नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी ठगी गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर
८. कोरोनाका गम्भीर बिरामीलाई सङ्क्रमणमुक्त भएका व्यक्तिको ‘प्लाज्मा’ दिने तयारी
९. खोलाले बगाउँदा दुई बेपत्ता